လှုပ်ရှားမှုများ | Union Attorney General’s Office
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (JICA)၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ပြောင်းလဲမှုများကြောင့် နိုင်ငံတကာ၏စိတ်ဝင်စားမှုများ များပြားလာသောအချိ်န်အခါတွင် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးသည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ထွန်းကားစေရန် ဂျပန်အစိုးရနှင့်ပူးပေါင်း၍ (၂၀၁၃)ခုနှစ် နိုင်ဝင်ဘာလတွင် ပရောဂျက်အသစ်တစ်ခုကို စတင်ခဲ့ပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အစိုးရအေဂျင်စီဖြစ်သော ဂျပန် အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့(The Japan International Cooperation Agency (JICA)) အနေဖြင့် (၂၀၁၃)ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှစတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေရေးရာ၊ တရားစီရင်ရေးရာနှင့် ဆက်စပ်ဌာနများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းပရောဂျက်ကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်လျှက် ရှိပါသည်။
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် အခြားအစိုးရရုံးအဖွဲ့အစည်းများရှိ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း နိုင်ငံဝန်ထမ်း များ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်မြင့်မားမှုကို ရည်မှန်းဦးတည်ကာ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ ချမှတ်ထားသော မဟာဗျူဟာ များကို လက်တွေအကောင်အထည်ဖော်အောင်မြင်အောင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားရန်မှာ ဤပရောဂျက်၏ အဓိကရည်မှန်းချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို မှန်ကန် ကောင်းမွန်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက် တိကျကောင်းမွန်သော ဥပဒေမူကြမ်းများ ရေးဆွဲစိစစ် ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဥပဒေအရာရှိများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လေ့ကျင့် သင်ကြားရေး စနစ်များပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဟုဆိုအပ်သော အဓိကကဏ္ဍကြီးနှစ်ရပ်ဖြင့် ဤပရောဂျက်ကြီးကို ဆောင် ရွက်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပါသည်။
ယခုလက်ရှိတွင် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ ရုံးအဆောက်အဦးအတွင်းတွင် JICA Office ကို ဖွင့်လှစ်ကာ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အစိုးရဥပဒေအရာရှိတစ်ဦးနှင့် ရှေ့နေတစ်ဦးပါဝင်သော JICA advisor (၃)ဦးဖြင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ နိုင်ငံဝန်ထမ်းများနှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ပူးပေါင်းကာ အတူတကွ အလုပ်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ပရောဂျက်၏ အဓိကရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်ဖွံ့ဖြိုးနိူင်စေရေး အတွက် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ အရာရှိများနှင့်အတူ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက် Working Groups များကို ဖွဲ့စည်း ပြီး၊ ဤပရောဂျက်၏ အဓိကကဏ္ဍကြီးနှစ်ရပ်ကို အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် နေ့စဉ်အတူတကွဆွေးနွေးဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ထို့ပြင်၊ ဂျပန်နိုင်ငံ ဥပဒေ ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဂျပန်နိုင်ငံ တရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ ဂျပန်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာရှေ့နေများကောင်စီ၊ အတွေ့အကြုံ များပြား ဂုဏ်သတင်း ကြီးလှသော ဂျပန်လူမျိုး ပညာရှင်များနှင့် အခြားထောက်ပံ့အဖွဲ့အစည်း ပါတနာများ၏ ထောက်ပံ့အားပေးမှု များကို ရယူကာ၊ ဂျပန်နိုင်ငံသို့လေ့လာရေးများ ဖိတ်ကြားခေါ်ယူ၍ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လူစွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ၊ ဗဟုသုတများကို လေ့လာစေခြင်းများဖြင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး နှင့် အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်လျှက် ရှိပါသည်။
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဒေါက်တာထွန်းရှင်နှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Patrizianna SPARA- CINO – THIELLAY ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့မှ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် မျိုးစောင့် ဥပဒေများကို ဆွေးနွေးခြင်း
၂၀ ၊ မေ ၊ ၂၀၁၅
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဒေါက်တာထွန်းရှင်အား ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Patrizianna SPARA- CINO – THIELLAY ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့နံနက် ၉နာရီက ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဧည့်ခန်းမသို့ လာရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်သည်။
ယင်းသို့တွေ့ဆုံရာတွင် Mrs.Patrizianna က ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် မျိုးစောင့် ဥပဒေများကိုလည်း သိရှိလိုပါကြောင်း မေးမြန်းဆွေးနွေးသည်။ အဆိုပါ မေးမြန်းချက်အပေါ် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်က ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် အခန်းကဏ္ဍများ၊ လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်တွင် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေမှုများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် သမ္မတကြီး၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူစာချုပ်များ ကိုလည်း မကြာမီ လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိမှုများ၊ မျိုးစောင့်ဥပဒေကြမ်း (၄) ခုမှာ ဥပဒေကြမ်းအဆင့်၌သာ ရှိသေးပါကြောင်းနှင့် ယင်းဥပဒေကြမ်း (၄)ခု၏ ဥပဒေအနှစ်သာရ (Spirit of Law) ၏ အရေးပါပုံများကိုလည်း ရှင်းလင်းပြောကြားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။